गएको साता भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको दुई दिने भ्रमण गरिन् । खासमा उनको भ्रमण अपर्झट भएको थियो । उनको भ्रमण पूर्वनिर्धारित थिएन । सरकारी तवरमा नत भ्रमणको तयारी नै गरिएको थियो ।
उनको नेपाल भ्रमणको बारेमा गत सोमबार भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले घोषणा गर्यो । अनि नेपाल सरकारले बुधबार अनि उनी बिहीबार नै नेपाल आइपुगिन्, शुक्रबार फर्किहालिन् पनि । यसरी यति हतारमा किन भ्रमण गर्नु परेको होला? अनि सरकारी निम्ता विनै किन आए होलान् ? नेताहरुसँग के कस्ता कुरा गरे हेलान् भन्ने प्रश्नहरु उब्जनु स्वभाविकै हो ।
किन आए स्वराज?
भारतले नेपाललाई सधै भन्दै आएको कुरा के हो भने हामीबीच कुटनीतिक तथा राजनीतिक मात्र होइन, जनजनको सम्बन्ध छ भन्ने नै हो । त्यसलाई रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ । यसलाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर, भारतको आफ्नै बुझाइमा र नेपालमा पनि देखा परेको संकेत के हो भने विस्तारै त्यो बिशेष सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिक संस्थापनले विकल्प खोजिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण भारतले पछिल्ला केही बर्षमा प्रदर्शन गरेको ठूल्दाई व्यवहार र आक्रमक रुपमा दक्षिणतिर लम्कन थालेको चीन नै हो ।
खास गरेर नयाँ संविधानको घोषणापछि भारतीय नेताहरुले त्यसमा असन्तुष्टी पोखेको थियो । त्यसमा उनीहरुले मधेसमा भएको आन्दोलनलाई प्रमुख कारणको रुपमा देखाए । हुनपनि भारतीय मुलका नेपालीहरु बसोबास गर्ने तराईमा आन्दोलन भएपछि त्यसमा चासो नराख्ने कुरा भएन, राख्यो । तर भारतले त्यस सम्बन्धमा जुन खालले कठोर नाकाबन्दीसम्मको अस्त्र प्रयोग गर्यो त्यसले नेपाली संस्थापन डराएन, चिढियो । यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा इतिहासकै सबैभन्दा न्यून तहमा पुग्यो ।
आफु प्रधानमन्त्री भएलगतै छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सबै दक्षिण एशियाली सरकार प्रमुखहरुलाई आफ्नो सपथमा निमन्त्रणा गरेको मोदीको विदेश नीतिलाई यो ठूलो झड्का थियो । कुरा यतिमा सिमित भएन । संविधानमा देखिएको असन्तुष्टी र नाकाबन्दीका बेला भारतसंग टक्कर लिएको भनेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसंगको गठबन्धनबाट झण्डै दुई तिहाई स्थानमा जीत हाँसिल गरेपछि मोदीले दोस्रो पटक नेपालमा हार व्यहोर्यो ।
यो अवधीका भारतले एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटाउने र ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास नगरेको होइन । तर, विभिन्न कारणहरुले तत्काल यो गठबन्धन टुट्ने संकेत देखिएको छैन । गठबन्धन नटुट्दा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले नेपालमा पुरा अवधी सरकार चलाउनेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा भारतसँग सुलाह भन्दा अर्को कुनै विकल्प रहेन ।
त्यसैले अहिले नेपाल आउनुको प्रमुख कारण एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनको डोरी कति बलियो छ भनेर आफैले छाम्ने र चुढाउन नसकिने अवस्था रहेको खण्डमा त्यही अनुसार सम्बन्धलाई बिस्तार गर्ने ध्येय देखिन्छ । सके आफ्नो पपेटलाई रोज्ने र नसकेको खण्डमा भएकालाई नै आफ्नो पपेटको रुपमा रपान्तरित गर्ने भारतीय चाहना रहेको छ ।
यसरी सम्बन्ध सुधार गर्न सकेको खण्डमा मात्र चीन तिर ढल्कंदै गरेको ओली र नेपाली राजनीतिलाई फेरी दक्षिणतिर ढल्काउन सकिन्छ भन्ने भारतीय बुझाइ हो । त्यसका लागि परम्परागत रुपमा नेपालका सरकार प्रमुखले पहिलो भ्रमण भारतको गर्ने चलनलाई यथावत टिकाउन सकेको खण्डमा मात्र पनि सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ । जानकारहरु अझ नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो भ्रमण हुनसक्ने पनि बताइरहेका छन् । यसअघि मोदी र ओलीबीचको टेलिफोन संवादका बेला पनि ओलीले मुक्तिनाथ र जनकपुरको भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको बताइएको थियो ।
स्वराजको सन्देश के थियो?
स्वराजले ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग एक्लाएक्लै भेटावार्ता गरिन् । त्यसपछि मात्र ति नेताहरुको सहयोगी अन्य नेताहरुसहित र आफ्नो पनि विदेश सचिवलगायतको टोलीलाई राखेर छलफल गरे । ति औपचारिक कार्यक्रमहरुमा स्वराजले आफु नेपालले प्राप्त गरेको चुनावलगायतका सफलतामा बधाई दिन आएको बताइन् । अनि धेरै लामो र राज्यस्तरका विषयहरुमा खासै छलफल गरिनन् । मात्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिन् । तर, एक्लाएक्लै कुराकानीमा के कुरा भयो भन्ने कुरा अझै बाहिर आएको छैन ।
यद्यपी चुहिएको जानकारी अनुसार ओलीसंगको भेटका बेला स्वराजले आफु सम्बन्ध सुधारको लागि र भेटेरै बधाई दिन आएको बताएकी थिइन् । उनले नेपाल भारतको लामो र बिशेष सम्बन्धमा आँच आउन दिन नहुने कुरामा जोड दिएकी थिइन् । साथै घुमाउरो पाराले पछिल्ला बर्षहरुमा भारतले अख्तियार गरेको नीति सही नभएकोसमेत उल्लेख गरेकी थिइन् । अव सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउनका लागि दुवै तर्फबाट काम हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री मोदीको मिलेर काम गर्ने र दुवै देशको समृद्धिमा एक अर्काको साथ हुनुपर्ने सन्देश दिएकी थिइन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवासंग पनि उनको कुरा यही सेरोफेरोमा थियो । बिशेष गरेर उनीहरुसंग अवको राजनीतिक घट्नाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्नहरु गरेकी थिइन् । अलि रोचक चाही मधेसी दलका नेताहरुसंगको छलफलका क्रममा भएको बताइएको छ । राजपाका केही नेताहरुले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका थिए । तर, स्वराजले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिइनन्, त्यसमा प्रतिक्रियासमेत जनाइनन् । बरु उनको आशाय अव बन्ने नयाँ सरकारसंग मिलेर काम गर्न भन्ने थियो । अझ घुमाउरो पाराले ओलीको नेतृत्वका सरकार बनाउन सघाउनु भन्ने खालको थियो । त्यसमा माओवादी सशंकित देखिएको छ । एमाले र मधेसी दलहरुलाई मिलाएर गठबन्धन टुटाउन त खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भित्री सर्कलमा गरेका छन् ।
यी सबै भ्रमण र भेटघाटको निचोड सन्देश भनेको भारत नयाँ शिराबाट सम्बन्ध पुनस्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने नै हो । साथै नयाँ बन्ने ओली नेतृत्वको सरकार चीनतिर ढल्कने होइन, भारत हर प्रकारको सहयोग गर्न तयार छ भन्ने थियो । यसले भारतीय राजनीतिक तहमा केही बदलाव आएको हो की भन्ने देखिएको पनि छ । बिशेष गरेर संविधान घोषणापछिको उसको असन्तुष्टीलाई अव थाँती राखेको देखिएको छ । यदी यो हो भने भारतले नेपालको संस्थापनसंग पुरानै खालको सम्बन्ध स्थापितको कोशिस गरिरहेको सत्य हो ।
वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा दुई मत भएन । ओली सरकारले गर्नुपर्ने केही बिशेष काम भनेको भारतसंगको सम्बन्धलाई पुनस्थापित गर्नु पनि हो । नेपालका लागि भारत बाध्यता हो । एउटै ओछ्यानमा सुत्दा खुट्टा लाग्छ भने जस्तै उत्तरचढावहरु आइ नै रहन्छन् । यद्यपी भारतलाई इग्नोर गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा महाशक्तिको होडमा अघि बढिरहेको छिमेकीसंग पैठेजोरी खोज्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्नु नै फाइदाजनक हुन्छ । ओलीले आफ्नो मुखमा लगाम लगाउनु पर्छ । अहिले विगतको जस्तो बिषम परिस्थिती होइन । यद्यपी आफ्नो मुलुकको हितको रक्षा कुटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट गर्न भने चुक्न भएन । सधै नेपाली नेताहरु आफ्नो सानातिना स्वार्थलिएर नयाँ दिल्ली जाने गरेकाले हेपाइमा पर्छन् । आफ्नो सबै कुरा दिएको थाहा हुँदैन । मुलुकको हित भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख बनाउँछन् ।
दोस्रो कुरा दक्षिणतिर आक्रमक रुपमा आउँदै गरेको उत्तरको चीासंगको सम्बन्ध पनि हो । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतलाई देखाईदिने भावनाबाट नै किन नहोस् चीनसंग व्यापार तथा पारवाहनलगायतका केही महत्वपूर्ण सन्धीहरु भएका छन् । त्यसको निरन्तरताका साथै थप सन्धी तथा लगानीको लागि चिनियाँहरुसंगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यसका लागि विगतदेखि रोकिंदै आएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिनको भ्रमणलाई संभव गराउनु पर्दछ ।
यद्यपी चीनको कार्ड देखाएर भारतसंग घुर्की लगाउन सकिने अवस्था यो होइन, नेपालसंग भन्दा कयौं गुणा धेरै व्यापार र लगानी यि दुई मुलुकबीच छ । त्यसैले सन्तुलित सम्बन्धमा नै नेपालले हितमा हुनेछ ।